Yini ifolda ye-Office14? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Yini i-office14 - indlela yokubhekana
Yini i-office14 - indlela yokubhekana
Yini ifolda ye-Office14?
I-Office11 igama langaphakathi le-Office 2003, Office12 lelo le-Office 2007 neIhhovisi14lokho kweHhovisi 2010. ... Lokho kuzochaza ukuthi kungani usenayoamafoldaye-Office 2003 no-2007. Njengoba manje usuneHhovisi 2010, kufanele usebenziseIhhovisi14ekubhalweni okufakiwe nasezindleleni zefayela.Jul 16 2011
Kulungile ukuze uthole iWindward Run ku-Windows 7 version, chofoza inkinobho yokuqala ngezansi kukhona lokhu kuseshwa kwezinhlelo namabhokisi wefayela phakathi kwazo zonke izinhlelo nangaphansi kwesikrini osithayipha ebhokisini, uwine igama elithi Ezinye izinto nazo uthole ukuthi uwine igama ongawenzi uma ufuna ukulihlunga ngakho-ke lithola igama elisho kodwa lifaka uphawu lwefayela le-EXCI ngoba leli yifayela uqobo esilifunayo futhi eligijima emoyeni lilihlukanisa yize lidunusa ukubheka ukuthi leli yifayela olithola inguqulo ongalichofoza ukuyivula kuvula uhlobo lwegama le-microsoft likhona igama le-microsoft elifana nawe kulokhu ungabona ukuthi yiMicrosoft Office Basic Edition2003 leyo inguqulo engiyisebenzisayo iFlipso leyo inguqulo esiyisebenzisayo ngifuna ukusebenza Ukuyivula, vula iculo, bese into elandelayo ithi na ch Luv, akusimina manje bese uchofoza kwesokudla kuso, uvule indawo yefayela bese uvula ifolda yakho futhi kufanele ubone okuthile okufana nakho indlela ngoba kukhona uhlelo lwe-C fil es 86 I-Microsoft Office yalokhu kwe-11 kimi kungenzeka yehluke kuwe, ise-office 11 nakule folda uma uskrolela phansi futhi unefolda kimi ngoba i-oda alibhalwanga kahle unazo zonke lezi zinto zonke lezi zinto ifolda phezulu nakwezinye izindawo kule folda Uhlu imvamisa ingezansi uma une-inalfabetic oda, ukwenziwa kweLuvward kulungile, leli iphuzu esililangazelele ku-Hosta, ngakho-ke udinga ukubhala leyo ndlela futhi kulapho uvala i-Hosta bese uvula ukuthi iyiphi inguqulo engingayazi ukuthi iyiphi i-Foster onayo, kepha alikho iculo elingalingani kahle noma kunjalo, ngakho-ke uya eculweni futhi avumele umbukeli ongezansi akhethe futhi sidinga ukuthola le folda. Ngimane ngiseshe le folda kule ndlela esiyitholile phambilini ngabe uya lapho Amafayili Ohlelo Lwekhompyutha 86 laphaya I-Microsoft OfficeMicrosoft Office futhi kimi bekuyi-Office 11 Office 11 Uzibona zonke lezi zinto, uskrolela kuzo uze ubone uma uke wabona. sebenzisa iZwi Execu. win manje, uma ungakwazi ukutshela i-exe, lokho kungenxa yokuthi awuzange usebenzise ezinye izandiso kuzinketho zakho zefolda.
Bese kuthi ngokuzayo lapho uzakhele iculo, ungayeka ukuthi yini iculo uPercy ekhaya lapho iningi lelo linguSam Me lingagcini nje ngokuthatha indlu yangasese owawunezingoma kimi futhi akuyona leyo nto enkulu eyakudalela okuthile akuzwakali kahle bese uthanda ukubheka ixhaphozi lakho lengoma lapho uya khona ukuze kuthi uma uthola isihlabelelo somculo ongeke usishintshe ingabe leyo yindlela iculo lakho elikuyo yi-EMT Ucele iculo ngefomethi yeRichtext uhlu lwami lulungile ngombono wami ngakho Ngizokuqeda lokhu manje uma ungakaze ubone noma yiziphi izandiso kumafoni akho, okumele ukwenze, ukuya kuphaneli yokulawula uma ungesabi ungazibona ungabona ukubuka kwesigaba okungumbono wabo ovamile i ma g le mibono hhayi i-onyou ithe uya kokufika kwethu nezinketho zokubamba bese uya kuthebhu yokubuka bese ubheka ezansi lapho uze uthole izandiso ezifihliwe zezinhlobo zamafayela ezaziwayo bese uthikha ibhokisi bese ushaya u-apply bese ulungile bese kufanele ubone exe nazo zonke ezinye izandiso ngemuva kwamagama wamafayela
Ngilikhipha kanjani i-Office14?
Vele, indlela yokuqala okufanele uhlale uyisebenzisakhiphaisoftware efana neMicrosoft Office ivela kokukhipha okusemthethweni. Lokhu kuzotholakala ezinhlelweni nakuZici ku-Control Panel noma ku-Apps ku Windows 10 Amasethingi. Khetha uhlobo lweMicrosoft Office kusuka kuhlu bese uqhafaza ifayela le-Khiphainkinobho.
Iyiphi inguqulo yeHhovisi eyiHhovisi 15?
Ithebula lenombolo yenguqulo
Izinombolo ezimbili zokuqala
ishumi nanhlanu IMicrosoftIhhovisi2013
IMicrosoft Office 2016 (enamagama ahlanganisiweIhhovisi 16) inguqulo ye-Microsoft Office product suite, elandela i-Office 2013 ne-Office for Mac 2011 ne-Office 2019 eyandulele kuwo womabili amapulatifomu. Ikhishwe ku-macOS ngoJulayi 9, 2015, nakuMicrosoft Windows ngoSepthemba 22, 2015, yababhalisile beHhovisi 365.
Sanibonani futhi ngamukelekile kokusha ku-Office 2016. Esikhundleni sokugxumela ngqo kokusha ku-Office 2016, ngicabange ukuthi singaqala uchungechunge ngengxoxo yokuthi iHhovisi neHhovisi 365 basebenzisana kanjani. Konke lokhu kusha kubantu, ngakho-ke ngithanda ukusiza ukuqeda okunye ukudideka esikubona enkampanini lapho abantu becabanga ukuthi iHhovisi selibizwa nge-Office 365, okuyiphutha.
IMicrosoft Office ineminyaka engaphezu kwengu-25 ikhona uma sibheka umlando owaqala ngonyaka ka-1990. Yaqala ngephakethe eliyisisekelo eline-Word, Excel ne-PowerPoint. Izicelo eziningi zingeziwe eminyakeni edlule futhi manje sesiyabona ukuthi i-Office Suite kanye Nezicelo Ezithuthukisiwe, kuya ngohlobo oluthengiwe, zifaka izicelo ezingaphezu kweshumi nambili ngaphezu kwezinguqulo ezisuselwa kuwebhu ezinye zazo.
Njengoba ubona lapha sine-Word, Excel, PowerPoint, Onenote, Outlook, Publisher, Access. Bese kuba khona i-OneDrive, okuyingxenye ye-Office 365. Kukhona i-Skype, kune-Visio ne-Project, kanye nezinye izinhlelo eziningi ezixhuma ku-Office 2016.
Ukudideka kuvela lapho abantu becabanga ukuthi iHhovisi, njengamanje iHhovisi 2016, liyatholakala kuwo womabili ama-PC nama-PC MACs afana neHhovisi 365. Alikho. IHhovisi lika-2016 yilo uhlu lwezicelo eseziguqukile iminyaka engama-25.
I-Office 365 yisixazululo sokubhalisa esikuvumela ukuthi uthenge izixazululo zeseva njenge-Exchange Online, i-Sharepoint Online njll kanye nezinhlelo zezinhlelo zokusebenza zomsebenzisi wokugcina ezinikezwa lapha, ungabona ukuthi kunezinhlelo zebhizinisi nezamabhizinisi, kukhona nezinhlelo zasekhaya -Umsebenzisi ukuthi babe nesakhiwo esihlukile ngoba kuhloselwe ikakhulukazi ukufakwa kwezicelo zehhovisi, kepha besifuna ukubheka lokhu ngokombono webhizinisi futhi uyabona ukuthi uma uthenga lezi zinhlelo ezahlukahlukene, banamaphoyinti entengo ahlukile. Lapha ngezansi uzothola izici ezahlukahlukene, ngakho-ke ngokwesibonelo uhlelo lwe-Business Essentials alunazo izinhlelo ze-Office Uya ezinhlelweni ze-Enterprise esine-E1 engenazo izinhlelo ze-Office. Ayikho i-Word Excel PowerPoint, kepha futhi sine-Plus neNkampani E3 enezicelo zeHhovisi zabasebenzisi bokugcina.
Uma weqa phansi ungathola okuningi mayelana nalezi zinhlelo nokuqukethwe kwazo. Isibonelo, noma uhlelo lweBusiness Essentials ne-E1 belungenazo izinhlelo zokusebenza ezifakiwe, unezinguqulo eziku-inthanethi ze-Office ezibandakanya i-Word, Excel, ne-PowerPoint. Uma unolunye lwalezi zinhlelo olufaka ibhokisi leposi, ngokuqinisekile unayo inguqulo eku-inthanethi ye-Outlook noma i-Outlook kuwebhu, ukuze ukwazi ukufinyelela i-imeyili yakho ngokusebenzisa izingosi eziku-inthanethi.
Ngenkathi i-Office 2016 ihlala iHhovisi kumongo wayo, kufaka phakathi i-Word Excel PowerPoint njll, indlela oyithenga ngayo ishintshile. Imodeli yokubhalisile ikusasa. Enye yezinzuzo ezibalulekile zokubhalisela isoftware yakho ukuthi izibuyekezo zesixazululo sakho zingezwa kusixazululo sakho ngezibuyekezo ezijwayelekile ze-inthanethi akudingeki uzikhokhele kepha ongazijabulela njengengxenye yokubhaliselwe kwakho.
ukuxhuma okuzenzakalelayo vpn
Kweziqeshana ezilandelayo ungabona yonke imisebenzi emisha yezinhlobonhlobo ze-Office ezifakiwe ozaziyo nazithandayo. Uzobona ezinye izici zohlelo lokusebenza eziku-inthanethi ezizokusiza ukukhombisa ukubonga kwakho okugcwele ngeHhovisi. Ngifuna ukukubonisa ukubuka kwe-portal ye-Office 365, lapha ungabona ukuthi ngingene ngemvume nokubhaliswa kwami ​​kwe-Office 365 nangokwami, lapha ungabona ukuthi ungaqala kuphi, kepha uma ngichofoza kulokho kuqalisa okuncane kohlelo lokusebenza phezulu kwesobunxele ingikhombisa zonke ezinye izinketho enginazo.
Ngikwazi ukufinyelela i-imeyili yami ngqo nge-Outlook kuwebhu, noma ngine-Word online. Ngine-Excel online, PowerPoint, Onenote. Kukhona okunye ukusetshenziswa okungeziwe ongakaze uzwe ngeDelve Sway.
Lokhu kufakiwe. Manje abaningi kungenzeka bangakuboni lokhu futhi kungenzeka kungadingeki ngoba bangaba nebhokisi leposi ku-Office 365 abaxhuma kulo nge-Outlook 2016, kepha kungenzeka bangaze bangene ngemvume kusixazululo ngengosi uqobo uma unebhokisi leposi ngokwesibonelo, ungafinyelela i-imeyili yakho nge-Outlook kuwebhu. Khumbula ukuthi akuwona wonke umuntu onazo zonke lezi zinhlelo zokusebenza ezitholakala kubha yabo yokuqalisa.
Kuya nge-portal, kuya ngezifiso zabaphathi ukunika amandla lezi zinhlelo zokusebenza ngokuhambisana nezimvume ongabelwa zona, kepha njengoba ubona ukuthi kunezicelo eziningi ezitholakalayo futhi ungenza okuningi nge-inthanethi ingosi. Ungabona futhi ukuthi ungafaka i-Office kwi-PC yakho kusuka lapha ormac ungafaka futhi i-Office suite kumadivayisi akho uma usebenzisa i-iOS ne-Android. Yisikhathi esimnandi bakithi.
I-Office 2016 ngokungangabazeki inguqulo yakamuva futhi enkulu kunazo zonke kuze kube manje, izindlela zokusabalalisa nezinketho zepulatifomu zihluke kakhulu kunangaphambili, futhi izici zokubambisana, ikakhulukazi ne-Office 365 ku-backend, ziyenza ikhiqize kakhulu kunanoma yibaphi ababengaphambi kwayo. Ngiyethemba ukuthole lokhu kufundisa. Ngifuna ukukubonga ngokubuka futhi ujabulele iziqeshana ezingezansi.
Uyini umehluko phakathi kwe-office11, office12 ne-office14?
I-Office11 yigama langaphakathi le-Office 2003, Office12 lelo le-Office 2007 ne-Office14 lelo le-Office 2010. Mhlawumbe uke wafaka izinhlobo zangaphambilini ze-Office ngaphambi kokufaka i-Office 2010?
Aphi amafayela e-Microsoft Office 16?
Qhafaza-Ukuqalisa #Windows 64-bit: C: Program Files Microsoft Office 16 ClientX64 Root Office16 Windows 32-bit: C: Program Files (x86) Microsoft Office 16 ClientX86 Root Office16
Kungani inguqulo 13 yeMicrosoft Office yeqiwe?
Uhlobo lwenguqulo 13 lweqiwe ngenxa yokwesaba inombolo 13. Phambilini bekucatshangwa ukuthi iHhovisi 2010 (ngaleso sikhathi elalibizwa ngeHhovisi 14) lizothunyelwa engxenyeni yokuqala yonyaka ka-2009. Ngo-Ephreli 15, 2009, iMicrosoft yaqinisekisa ukuthi iHhovisi 2010 lizoba ikhishwe engxenyeni yokuqala ka-2010.
Ngabe udinga ukusebenzisa i-office14 kokufakiwe kwerejista?
Njengoba manje usuneHhovisi 2010, kufanele usebenzise i-Office14 kokufakiwe kwerejista nasezindleleni zamafayela. Ingabe le mpendulo iye yasiza? Uxolo lokhu akusizanga. Kuhle! Siyabonga ngempendulo yakho.